Xa sichitha impelaveki, sifuna ukonwabela ixesha lethu lasimahla kwaye sinikele usuku kwizinto esizithandayo. Xa singafuni ukuphazanyiswa ziifowuni, sifuna iselfowuni yomnxeba yokulwa nomnxeba ophazamisayo. Ngamanye amaxesha, asifuni kuthetha namntu, kodwa abantu abacaphukisayo baya kuhlala befowuna ...
Ijammer yeselfowuni ijolise ikakhulu kwiindawo ezahlukeneyo apho ukusetyenziswa kweeselfowuni kungavumelekanga, njengamagumbi okubhalela iimviwo, izikolo, izikhululo zegesi, iicawa, iinkundla, amathala eencwadi, amaziko eenkomfa, iithiyetha, izibhedlele, oorhulumente, ezemali, iintolongo, ukhuseleko loluntu. namagunya omkhosi. Nini...
Umgaqo weSelfowni kaJammer
Ifowuni yeselfowuni ijolise kuzo zonke iindawo apho ukusetyenziswa kweefowuni eziphathwayo kungavumelekanga, njengamagumbi oviwo ahlukeneyo, izikolo, izikhululo zegesi, iicawa, iinkundla, amathala eencwadi, amaziko enkomfa, iithiyetha, izibhedlele, oorhulumente, ezemali, iintolongo. , ukhuseleko loluntu kunye nomkhosi ...
Kutheni le nto iiJammers zithandwa kangaka
ngomphathi ku 20-08-23
Kule mihla, abagijimi beGPS badlala indima ebaluleke kakhulu kubomi bethu. Inani leendawo ezisetyenziswayo liyanda. Kutheni i-GPS jammers ithandwa kangaka? Ukuthandwa kwejammers ye-GPS kunento yokwenza nokusetyenziswa okubanzi kwe-GPS trackers, kuba izixhobo zokulandela umkhondo we-GPS zisetyenziswa ngokubanzi ...